Vaovao - Nanampy ny sekoly ambaratonga voalohany tao Xiaohekou ny biolojika Chenguang nandritra ny 11 taona misesy
Tamin'ny 2 Desambra, notanterahina tamin'ny fomba manetriketrika ny lanonana fanomezana loka ny Chenguang Group Fampianarana fanavaozana ny fototra ao amin'ny sekoly ambaratonga voalohany xiaohedao. Ny biolojia Chenguang dia nanolotra 93600 yuan an'ireo mpampianatra telo tsara indrindra amin'ny sekoly ambaratonga voalohany xiaohehe kilasy 1-6 tamin'ny fanadinana natambatra ny taom-pianarana 2019-2020 sy ireo mpampianatra nahazo loka nandray anjara tamin'ny fifaninanana isan-karazany. Mpampianatra maherin'ny 40 no nomena. Ity no taona faha-11 nisesy izay nanambazan'ny biolojia Chenguang ny sekoly ambaratonga voalohany Xiaohe.
Han Zhihua, mpampianatra matematika kilasy fahadimy, dia nahazo ny loka 7300 yuan tamin'ity. Amin'ny anaran'ny ankamaroan'ny mpampianatra ao amin'ny sekoly ambaratonga voalohany Xiaohe dia niresaka tamin'ny lanonana izy hisaorana ny biolojia Chenguang tamin'ny loka. Nilaza izy fa hiaina mifanaraka amin'ny iraka ampanaovina azy amin'ny asa ho avy ary hanao ezaka lehibe hamerenana amin'ny laoniny ny biolojia Chenguang sy ny sekoly ambaratonga voalohany Xiaohe miaraka amin'ny zava-bita tsara kokoa.
Nandritra ny taona maro, Chenguang Biotechnology Group Co., Ltd. dia nifikitra tamin'ny foto-kevitry ny "olona sy ny fiaraha-miombon'antoka orinasa", manankarena sy mieritreritra momba ny fanabeazana, ary tsy nanadino ny fampandrosoana ny fampianarana any an-trano rehefa nihalehibe sy nihanatanjaka. Hatramin'ny taona 2009, nandany vola vitsivitsy isan-taona ny orinasa tamin'ny fanatsarana ny fitaovam-pianarana sy ny fitaovan'ny mpianatra tany amin'ny sekoly ambaratonga voalohany sy ambaratonga faharoa, manome valisoa ireo mpampianatra tena mahay, manohana ireo mpianatra mahantra fatratra amin'ny fanadinana fidirana amin'ny oniversite, sns. Tamin'ny 2015, "vatsim-pianarana Chenguang" dia natsangana tao amin'ny sekoly ambaratonga faharoa Quzhou No.1 hanomezana valisoa ireo mpianatra mahay izay tafiditra tao amin'ny "University 985 ″. Nandritra ny folo taona lasa, biolojika Chenguang dia nanolotra yuan maherin'ny 2 tapitrisa hanampiana ny sekoly ambaratonga voalohany Xiaohe hanatsara ny toe-javatra mihazakazaka any an-tsekoly, hanomezana mpampianatra mahay, hanampy mpianatra maherin'ny 50 mahantra mahatsapa ny nofinofin'izy ireo amin'ny oniversite, ary mpianatra maherin'ny 50 tsara indrindra ao amin'ny Ny fanadinana fidirana amin'ny oniversite dia nahazo ny "vatsim-pianarana Chenguang", izay nahazo fiderana lehibe avy amin'ny fiarahamonina.
Amin'ny dingan'ny fampandrosoana biolojika Chenguang, mandray andraikitra mavitrika amin'ny fiaraha-monina izy ary mandray anjara amin'ny lahasa asa soa ho an'ny besinimaro. Ny orinasa dia nandray anjara betsaka tamin'ny fanohanana ny fampandrosoana ny asa sosialy ho an'ny fiarahamonina, ny fanampiana ny horohoron-tany, ny fananganana tanàna an-toerana, ny fitaterana ary ny fanabeazana, ary ny ady amin'ny toe-javatra valanaretina, miaraka amin'ny fampiasam-bola mitentina 23 tapitrisa mahery.